Unonzwisisa Here Kuti Nei Jehovha Achititarisa? | Yokudzidza
“Maziso aJehovha ari pose pose, achiramba akatarira vakaipa nevakanaka.”—ZVIR. 15:3.
PFUNGWA DZINOKOSHA DZOKUYEUKA
Nei Jehovha achiramba akakutarisa?
Jehovha anokunyevera, anokururamisa uye anokutungamirira sei?
Nei dzimwe nguva Jehovha asingapindiri patinosangana nemiedzo?
1, 2. Kutariswa kwatinoitwa naJehovha kwakasiyana sei nekushandiswa kunoitwa makamera?
MUNYIKA dzakawanda mava kunyaya kushandiswa makamera kuona kufamba kunenge kuchiita motokari mumigwagwa uye kuona maitikiro etsaona. Kana motokari ikatsika munhu, mutyairi wacho otiza, makamera aya anogona kubatsira mapurisa kubata mutyairi iyeye. Kuwanda kuri kuita makamera aya kuri kuita kuti zvisava nyore kuti mhosva dzevanhu dzirove.
2 Zvisinei, kushandiswa zvakanyanya kwava kuitwa makamera aya kwakafanana here nokutariswa kwatinoitwa naBaba vedu vane rudo Jehovha? Ichokwadi kuti Bhaibheri rinoti maziso ake “ari pose pose.” (Zvir. 15:3) Asi zvinoreva here kuti anoramba achiongorora kamwe nekamwe katinenge tichiita? Mwari anogara akatitarisa kuti angoona kana tichitevedzera mitemo yake aine chinangwa chokutiranga here? (Jer. 16:17; VaH. 4:13) Kwete! Jehovha anotitarisa nokuti anotida uye anoda kuti zvinhu zvitifambire zvakanaka.—1 Pet. 3:12.
3. Zvinhu zvipi zvishanu zvatichakurukura zvinoratidza kuti Mwari anotida?
3 Chii chichatibatsira kunzwisisa kuti kutariswa kwatinoitwa naMwari kunoratidza kuti anotida? Ngatikurukurei zvinhu zvishanu zvinoratidza kuti anotida zvinoti: (1) Anotinyevera kana akaona kuti tine mafungiro asina kunaka, (2) anotiruramisa kana tamutadzira, (3) anotitungamirira achishandisa mazano ari muShoko rake, (4) anotibatsira patinosangana nemiedzo yakasiyana-siyana, uye (5) anotipa mubayiro kana akaona kuti tiri kuita zvakanaka.
4. Jehovha aiva nechinangwa chei paakanyevera Kaini ‘nezvechivi chaimuvandira pasuo’?
4 Ngationei kuti Mwari anotinyevera sei patinotanga kuva nemafungiro asina kunaka. (1 Mak. 28:9) Kuti tione kuti Mwari anotinyevera sei, funga zvaakaita kuna Kaini uyo “akatsamwa kwazvo” paasina kufarirwa naMwari. (Verenga Genesisi 4:3-7.) Jehovha akakurudzira Kaini kuti ‘aite zvakanaka.’ Akamunyevera kuti kana akarega kuita zvakanaka ‘chivi chaimuvandira pasuo.’ Mwari akamubvunza kuti: “Uchachikunda here?” Aida kuti Kaini ateerere nyevero iyoyo oramba aine ukama hwakanaka naye.
5. Jehovha anotinyevera sei nezvemafungiro asina kunaka atingava nawo?
5 Mwari anotinyeverawo sei mazuva ano? Maziso aJehovha anonyatsoona zviri mumwoyo medu; hatigoni kumuvanzira chero chii zvacho. Baba vedu vane rudo vanoda kuti tiite zvakarurama asi havatimanikidzi kuchinja mararamiro edu. Achishandisa Shoko rake Bhaibheri, anotinyevera kana tava kuda kuita zvakaipa. Sei? Patinoverenga Bhaibheri zuva nezuva, tinowanzoona ndima dzinotibatsira kuti tikunde zvido zvakaipa uye mafungiro asina kunaka. Mabhuku edu echiKristu angaitawo kuti tione maitiro asina kunaka atingava nawo uye anotiratidza zvatingaita kuti tiakunde. Uye pamisangano yedu yeungano, tose tinowana mazano anouya panguva yakakodzera!
6, 7. (a) Chii chinoratidza kuti Mwari anonyatsoda mumwe nemumwe wedu? (b) Ungabatsirwa sei nenyevero dzatinopiwa naJehovha?
6 Nyevero dzose idzodzo dzinoratidza kuti Jehovha anotitarisa nokuti anotida. Bhaibheri rave riripo kwemazana emakore uye mabhuku anobudiswa nesangano raMwari anonyorerwa mamiriyoni evanhu. Uyewo, mazano anopiwa pamisangano anobatsira ungano yose. Kunyange zvazvo zvinhu zvose izvi zvakaitirwa vanhu vakawanda, Jehovha akaita kuti iwe pachako uone pfungwa dziri muShoko rake kuti ugadzirise mafungiro asina kunaka. Saka tinogona kutaura kuti Jehovha anonyatsoda mumwe nomumwe wedu.
Hana yedu yakadzidziswa neBhaibheri inotibatsira kuti tidzivise ngozi (Ona ndima 6, 7)
7 Kuti tibatsirwe nenyevero dzatinopiwa naMwari, tinofanira kutanga taziva kuti anoda chaizvo kuti zvinhu zvitifambire zvakanaka. Uye tinofanira kuita zvinotaurwa neShoko rake toedza kubvisa zvachose mafungiro asina kunaka. (Verenga Isaya 55:6, 7.) Kana tikateerera nyevero dzatinopiwa, hatizopindi muna taisireva. Zvisinei, ngatitii takundwa nomuedzo. Baba vedu vane rudo vanotibatsira sei?
BABA VEDU VANE RUDO VANOTIRURAMISA
8, 9. Zano ratinopiwa naJehovha achishandisa vashumiri vake rinoratidza sei kuti Jehovha anotida? Taura muenzaniso.
8 Patinoruramiswa naJehovha tinobva tanyatsova nechokwadi chokuti anotida. (Verenga VaHebheru 12:5, 6.) Ichokwadi kuti kupiwa zano kana kutsiurwa hakufadzi. (VaH. 12:11) Asi funga zvimwe zvinhu zvinotanga zvafungwa nemunhu anenge achitipa zano. Anofanira kutanga aziva zvatiri kuita zvingangokanganisa ukama hwedu naJehovha Mwari, ofunga nezvenzira yokutibatsira nayo asingatigumburi. Uyewo anofanira kuva nechido chokushandisa nguva yake uye simba kuti atibatsire kuona patinofanira kugadzirisa kuti tifadze Mwari. Kana munhu anokupa zano achinetseka zvakadaro, Jehovha anotofanira kuva anonetseka zvakanyanya.
9 Ngationei muenzaniso unotibatsira kuona kuti mazano atinopiwa nevashumiri vaMwari anoratidza kuti Jehovha anotida. Imwe hama yaigara ichiona zvinonyadzisira isati yawana chokwadi asi yakazorega tsika yayo. Asi chido chacho chainge chisina kupera sezvinongoita marasha anosara achipfungaira kana moto wadzima. Payakatenga foni yeserura, yakatangazve kuva nechido chokuona zvinonyadzisira. (Jak. 1:14, 15) Yakatanga kushandisa foni yayo kuona zvinhu zvinonyadzisira paIndaneti. Rimwe zuva payaiparidza nomumwe mukuru vachishandisa foni, mukuru wacho akakumbira hama iyi foni yayo. Mukuru wacho paakatanga kushandisa foni yacho, dzimwe nzvimbo dzepaIndaneti dzinoratidza zvinonyadzisira dzakatanga kubuda. Izvi zvakatoita kuti hama yedu yainge yava kupinda mungozi ibatsirwe. Yakabvuma zano rayakapiwa uye yakazokwanisa kukunda dambudziko rokuona zvinonyadzisira. Tinoonga chaizvo kuti Baba vedu vokudenga vane rudo vanoona kunyange zvivi zvatinoita pakavanda uye vanotiruramisa tisati takanganisa ukama hwedu navo!
KUSHANDISA MAZANO EBHAIBHERI KUNOTIBATSIRA
10, 11. (a) Tingaitei kana tichida kusarudza zvokuita? (b) Imwe mhuri yakazvionera sei kuti kubvuma kutungamirirwa naMwari kunobatsira?
10 Munyori wepisarema akaimbira Jehovha kuti: “Muchanditungamirira nezano renyu.” (Pis. 73:24) Pose patinoda kusarudza zvokuita, tinogona ‘kufunga’ nezvaJehovha nokushandisa Shoko rake kuti rititungamirire. Kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri hakungotibatsiri chete mune zvokunamata asi kunogonawo kutibatsira kuti tiwane zvokurarama nazvo.—Zvir. 3:6.
11 Tinogona kuona kuti Jehovha anobatsira sei vanhu vake kana tikafunga zvakaitika kune mumwe murimi airenda purazi munzvimbo ine makomo yeMasbate kuPhilippines. Murume uyu nemudzimai wake vaiva mapiyona enguva dzose uye vaiva nemhuri yakakura. Rimwe zuva vakashamiswa pavakaudzwa nemuridzi wepurazi kuti vaifanira kututa twavo vaende. Zvainge zvafamba sei? Vainge vapomerwa zvenhema kuti vainge vasina kutendeseka. Kunyange zvazvo hama iyi yainetseka kuti yaizonogara kupi nemhuri yayo, yakati: “Jehovha achatichengeta. Agara achitipa zvatinoda pasinei nokuoma kwezvinhu.” Hama iyi yakaita zvakanaka nokuvimba naJehovha. Papera mazuva, mhuri iyi yakafara payakaudzwa kuti yainge isingachafaniri kubva papurazi iri. Chii chainge chaitika? Muridzi wepurazi ainge aona kuti mhuri iyi yeZvapupu yaibatsirwa nemazano eBhaibheri kuti irambe yakadzikama isingambonetsani nevanhu, pasinei nezvayaipomerwa. Izvi zvakafadza chaizvo muridzi wepurazi zvokuti akatovawedzera mumwe munda wokurima. (Verenga 1 Petro 2:12.) Chokwadi Jehovha anotitungamirira achishandisa Shoko rake kuti tikwanise kukunda matambudziko atinosangana nawo muupenyu.
SHAMWARI INOTIBATSIRA KUTSUNGIRIRA MIEDZO
12, 13. Vamwe vanosangana nemamiriro ezvinhu akaita sei angaita kuti vafunge kuti Mwari haasi kuona dambudziko ravo?
12 Sevashumiri vaJehovha, tinosangana nemiedzo yakawanda uye imwe yacho inoramba iripo. Tinogona kunge tava nenguva yakareba tichirwara, tichishorwa nevomumhuri kana kuti tichitambudzwa. Uyewo tinorwadziwa kana tichimbotadza kunzwisisana nemumwe munhu muungano.
13 Somuenzaniso, unogona kurwadziwa kana imwe hama ikataura mashoko aunoona sokuti haana kunaka. Ungati, ‘Zvinhu zvakadai hazvifaniri kuitika musangano raMwari!’ Asi hama yacho inobva yatowana ropafadzo muungano uye zvinoita sokuti vamwe vanoirumbidza. Ungabvunza kuti, ‘Chii chiri kumboitika? Jehovha haasi kuona here? Nei asiri kupindira?’—Pis. 13:1, 2; Hab. 1:2, 3.
14. Ndechipi chimwe chikonzero chingaita kuti Mwari asapindira mumatambudziko atingasangana nawo?
14 Jehovha anogona kunge aine zvikonzero zvakanaka zvokusapindira. Somuenzaniso, paunoona sokuti hama yacho ndiyo ine mhosva, Mwari anogona kunge achiona nyaya yacho neimwe nzira. Zvimwe anenge achitoona kuti iwe ndiwe wakatonyanya kutadza. Mashoko awakaona sokuti akakurwadza anogona kunge aitova zano rakanaka raunofanira kushandisa. Munyaya yavo youpenyu, Hama Karl Klein avo vaiva muDare Rinodzora vakataura nezveimwe nguva pavakatsiurwa naHama J. F. Rutherford. Pave paya, Hama Rutherford vakakwazisa Hama Klein vachinyatsofara. Asi Hama Klein vainge vachakagumbuka nekutsiurwa kwavainge vaitwa, saka vakangodairawo zvechirango. Hama Rutherford pavakaona kuti Hama Klein vainge vachakadumbirwa, vakavanyevera kuti vaizobatwa mumusungo waDhiyabhorosi. Hama Klein vakazonyora kuti: “Kana tikaramba takagumbukira hama yedu, kunyanya kana yataura zvainofanira kutaura kuti itibatsire, zviri nyore kuti tibatwe mumisungo yaDhiyabhorosi.” *
15. Unofanira kuyeukei paunenge uri mumuedzo?
15 Asi tingatadza kuva nemwoyo murefu kana muedzo wedu uchiita sokuti hauperi. Pakadaro tingaita sei? Ngatitii uri kutyaira motokari wongoerekana waona mugwagwa wauri wavharika nemotokari dzakawanda. Hauzivi kuti ucharamba wakamira kusvika riini. Kana ukatadza kumirira woedza kutsvaga mumwe mugwagwa, ungarasika. Ungatozononoka kusvika kwaunenge uchienda kupfuura zvawaizoita kudai wamirira zvako. Saizvozvowo, kana ukaramba uine mwoyo murefu uchiita zvinotaurwa neShoko raMwari, unokwanisa kutsungirira.
16. Nei dzimwe nguva Jehovha asingapindiri patinenge tiri mumiedzo?
16 Jehovha angasapindira patinenge tiri mumiedzo nokuti anenge achida kutirovedza. (Verenga 1 Petro 5:6-10.) Mwari haakonzeri miedzo. (Jak. 1:13) ‘Mhandu yedu Dhiyabhorosi’ ndiyo iri kukonzera matambudziko akawanda. Asi Mwari anogona kuita kuti matambudziko iwayo atibatsire kukura mune zvokunamata. Anoona kutambura kwatinenge tichiita, uye sezvo aine “hanya” nesu, anova nechokwadi chokuti kutambura kwacho nde“kwenguva duku.” Paunenge uchitambura, unonzwisisa here kuti Jehovha anenge achikuona uye kuti achakupa nzira yokubuda nayo mumuedzo?—2 VaK. 4:7-9.
WANA MUBAYIRO UNOBVA KUNA MWARI
17. Jehovha ari kutsvaga vanhu vakaita sei uye nei?
17 Mwari anoongororawo mararamiro edu aine chinangwa chakanaka. Achishandisa muoni Hananai, Jehovha akazivisa Mambo Asa kuti: “Kana ari Jehovha, maziso ake anotarira-tarira panyika pose kuti aratidze simba rake nokuda kwevaya vane mwoyo wakakwana kwaari.” (2 Mak. 16:9) Kunyange zvazvo Mwari asina kuona mwoyo wakakwana paakatarisa Asa, acharatidza “simba rake” kwauri kana ukaramba uchiita zvakanaka.
18. Kana uchinzwa sokuti vanhu havasi kuona zvakanaka zvauri kuita, unofanira kuyeukei nezvaJehovha? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
18 Kuti ‘atinzwire nyasha,’ Mwari anoda kuti ‘titsvake zvakanaka,’ ‘tide zvakanaka,’ uye ‘tiite zvakanaka.’ (Amo. 5:14, 15; 1 Pet. 3:11, 12) Jehovha anoona vakarurama uye anovakomborera. (Pis. 34:15) Funga zvakaitwa navananyamukuta vechiHebheru vainzi Shifra naPua. VaIsraeri pavaiva varanda muIjipiti, vakadzi vaviri ava vakatya Mwari kupfuura Farao uyo ainge arayira kuti vauraye vanakomana vose vechiHebheru pavaizvarwa. Zviri pachena kuti kutya kwavaiita Mwari kwakaita kuti vasauraye vacheche ava. Shifra naPua vakazopiwa mhuri dzavo pachavo. (Eks. 1:15-17, 20, 21) Jehovha akaona mabasa avo akanaka. Dzimwe nguva tinganzwa sokuti hapana anomboona zvakanaka zvatinoita. Asi Jehovha anozviona. Anoona zvakanaka zvose zvatinoita uye achatipa mubayiro.—Mat. 6:4, 6; 1 Tim. 5:25; VaH. 6:10.
19. Imwe hanzvadzi yakaona sei kuti Mwari anoona mabasa akanaka atinoita?
19 Imwe hanzvadzi yokuAustria yakaona kuti Mwari aiona kushanda nesimba kwayaiita muushumiri. Zvairi yerudzi rwechiHungarian, yakapiwa kero yemunhu aitaura chiHungarian kuti imushanyire. Yakabva yaenda pamba pacho asi yakashaya munhu. Yakaramba ichingodzoka pamba pacho. Dzimwe nguva yainzwa sokuti pamba pacho pane munhu asi hapana aidaira. Yaisiya mabhuku, tsamba, kero yayo nezvimwewo. Papfuura gore nehafu ichingoshanya, yakazowana munhu! Hanzvadzi iyi yakakwaziswa nemumwe mukadzi aifara uyo akati: “Pindai mumba. Ndakaverenga zvose zvamaiuya nazvo uye ndanga ndakakumirirai.” Mukadzi uyu paaisaoneka airapwa kenza uye aisafanira kuonana nevanhu. Vakatanga kudzidza Bhaibheri. Chokwadi Mwari akakomborera kushanda nesimba kwakaita hanzvadzi iyi!
20. Unonzwa sei nokutariswa kwaunoitwa naJehovha?
20 Jehovha anoona zvose zvauri kuita uye achakupa mubayiro. Kana ukaziva kuti Jehovha akakutarisa usanzwa sokuti uri kuongororwa nekamera iyo inoshandiswa kutsvaga zvaunokanganisa. Asi kuziva kuti wakatariswa ngakukubatsire kuti uve pedyo naMwari ane rudo uye ane hanya newe.
^ ndima 14 Nyaya youpenyu yaHama Klein yakabudiswa muNharireyomurindi yeChirungu yaOctober 1, 1984.